GESITS – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
GESITS အင်ဒိုနီးရှားအတွင်းပထမဆုံးလျှပ်စစ် Scooter ရှေ့ဆောင်တဦးတည်းအနေဖြင့်လျှပ်စစ် Scooter ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် Scooter တက္ကသိုလ်နှင့် ပူးပေါင်း. Garansindo Group မှတစ်ဦးပဏာမခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ် နည်းပညာတက္ကသိုလ် Sepuluh Nopember Institute မှ (၎င်း၏) Surabaya ၏။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. GESITS Garansindo လျှပ်စစ်စကူတာ, ဖွဲ့တစ်ခုအတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်
အဆိုပါ Scooter မြင့်မားသောအရည်အသွေး, လူကြိုက်များတဲ့အီတလီဆိုင်ကယ်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြောင်းခေတ်မီခြင်းနှင့်ပြိုင်ကားဆန်သောဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter 70 km / h ၏ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းများအတွက်အစွမ်းထက် 5000 ဝပ်လျှပ်စစ်မော်တာရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Scooter5စက္ကန့်အတွင်း 0-50 km / h ထံမှ accelerates ။
အဆိုပါ Scooter ကီလိုမီတာ 100 စုစုပေါင်းအကွာအဝေးနှစ်ခုဖြုတ်လီသီယမ်ဘက်ထရီရှိပါတယ်။ ဘက်ထရီ၏တာဝန်ခံအချိန်3နာရီဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ GESITS Scooter အညွှန်းအပါအဝင် Scooter applications များဝင်ရောက်ခွင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့် Google က Android ကိုအခြေခံသည့်ဒိုင်ခွက်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည်။
ကို 2020 Gesits ကိုမော်ဒယ်များ
Gesits ဆိုင်ကယ်အားလုံးကို filter ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တွင်ကြည့်ပါ။